Poker - Egwuregwu kachasị mma iji jiri oge ezumike - jluis37.com
Lovemụ mmadụ hụrụ egwuregwu n’anya. Ọ nwere ike ịbụ asọmpi yana okike, mana egwuregwu bụ ọkara ma ọ bụ ụzọ mgbapụ nke na-ebelata nrụgide na esemokwu. Karịsịa n’oge ọrịa na-efe efe, akụkọ na ihe ndị gbara ha gburugburu na-eju ndị mmadụ isi. Na nke ahụ, anyị enweghị ike ịpụ. Yabụ, kedu ka mmadụ ga – ga esi kwụsị nrụgide ahụ? Azịza kachasị mfe maka ajụjụ a bụ, ịntanetị. Hasntanetị aghọwo ogige. O nwere ihe niile maka onye obula. Enwere ọtụtụ nhọrọ igwu egwuregwu d e egwuregwu dịnụ nke ga-adabara onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na e nwere otu egwuregwu na-atọ ụtọn’ụwa niile ma bụrụ onye ama ama, ọ ga-abụ poker. Poker bụ egwuregwu cha cha nke na-abịa n’okpuru ụdị arcade. Egwuregwu ịgba chaa chaa abụghị naanị maka ntụrụndụ, mana ha na-eme ọbụbụenyi, na-akpata self service ma melite itinye uche nke onye ọkpụkpọ ahụ. Poker ndị okenye na-egwuri egwu na otu nke atọ ma ọ bụ anọ. Enwere ike igwu ya dika uzo. Ihe dị mma bụ, egwuregwu poker ugbu that a aghọwo ihe that a ma ama ma dị d e ọtụtụ weebụsaịtị.
Poker aghọwo egwuregwu dị n’ịntanetị maka ọtụtụ ihe. Na weebụsaịtị dị ka Unogoal usoro niile nke igwu egwu aghọwo ihe dị mfe, dị mfe ma na-atọ ụtọ. Na cha cha, enwere otutu nsogbu dika oge, ihe ndi ozo, ego wdg. Ma, na poker on the internet, onye ọkpụkpọ nwere ike ịhọrọ dika o si di mkpa. Oge ọ bụla nke ụbọchị ga-adabara egwuregwu ahụn’ihi d e saịtị pokern’ịntanetị bụ nke ụwa. Nke a pụtara, ọbụlagodi na ọ bụ abalị n ‘ọnọdụ gị, a ga-enwe onye ọkpụkpọ na-eche gafee ụwa. N’ụzọ dị otu a, ọdịghị naanị mmadụ ịnọ na-egwu naanị oge ma ọ bụ ụbọchị! Mgbe ahụ, akụkụ nke nchekwa. Egwuregwu dị n’ịntanetị dị nchebe karịa maka ọtụtụ ebumnuche. Saịtị anaghị anakọta ozi gbasara onwe onye gbasara ihe ọkpụkpọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnakọta, ọ gaghị eziga ha maka ọha d e eze iji nweta. Wayzọ a, ọ bụrụ t a egwuregwu atụgharịrị adịghị mma, ihe ọkpụkpọ ekwesịghị iche banyere ihe ọ bụla na-achọghị na kọntaktị ma ọ bụ egwu. Otu iwu a metụtara nkọwa ụlọ akụ. Ebe nrụọrụ ahụ anaghị echekwa nkọwa ọ bụla. N’ụzọ dị otú a, mmadụ nwere ike ijiden’aka banyere nkọwa akụ d e ụba ha. Saịtị na-decrypted nke na-eme un ọbụna odi mfe ma nọrọ ná nchebe.
Otu isi uru dịn’ịgba egwuregwu pokern’ịntanetị bụ na ọ na-enye onye ọkpụkpọ ohere ịnweta ọtụtụ ego na mgbakwunye. N’egwuregwu poker ọdịnala, onye ọkpụkpọ ga-enwe ike ịnweta self love ahụ enyere. Ọzọkwa, naanị onye mmeri ga-enwe ike iwere self love ahụn’ụlọ. Otú ọ dị, na poker on the internet, a na-enye ndị egwuregwu ọtụtụ ego. Maka ịbanye, maka igwu egwuregwu mbụ gị wdg. N’ụzọ a, ọ nweghị onye ga-eji ego efu laghachi. Onye ọ bụla ga-enwe ike irite opekata mpe ihe. Yabụ, poker ntanetị bụ ihe na-atọ ụtọ, nchekwa na izuike. Ọzọkwa, ọ bụ ụzọ na-atọ ụtọ iji kpata ihe ọzọ.